Kedu ka m ga-esi gbanye ụda na iPhone? The Real Idozi. - Iphone
gịnị kpatara na ipad m anaghị akwụ ụgwọ
kedu ihe mmelite ụgbọ ala verizon kacha ọhụrụ
kedu ihe nọmba 2 pụtara na bible
iphone m na -enyocha mmelite ruo ọtụtụ awa
Kedu ka m ga-esi gbanye ụda na iPhone? The Real Idozi.
How Do I Change Ringtone An Iphone
Naghị achọ ụdaolu na iPhone gị ma ịchọrọ ịgbanwe ya. Gị iPhone na-abịa na ọtụtụ ụdaolu e wuru n'ime ya, mana ị nwekwara nhọrọ ịzụta ụdaolu ọhụrụ na Storelọ Ahịa Tone. N'isiokwu a, m ga-akọwa esi gbanwee ụdaolu iPhone ka ị nwee ike ịhọrọ ụda ịchọrọ ịnụ mgbe ị natara oku, ederede, na ọkwa na ọkwa ndị ọzọ .
Etu esi agbanwe ụdaolu na iphone
Iji gbanwee ụdaolu na iPhone gị, mepee ngwa Ntọala wee pịa Undsda & Haptics -> Udaolu . Ekem, enweta na ụdaolu na ị chọrọ iji n'okpuru ndepụta nke Udaolu. Ga-amata na ụdaolu ahọrọla mgbe ị hụrụ obere akara ngosi anụnụ anụnụ na-esote ya.
Etu esi agbanwe ụdaolu na iPhone maka kọntaktị ndị doro anya
Malite site na imeghe kọntaktị ngwa na enweta na kọntaktị ị chọrọ ka a kpọmkwem ringtone maka. Na-esote, pịa Dezie na elu aka nri nke ngosipụta. Pịgharịa gaa na Pịa ụdaolu, wee pịa ụdaolu ịchọrọ ịnụ mgbe ọ bụla kọntaktị ahụ kpọrọ gị ma ọ bụ kpọọ gị ederede.
Etu esi azụrụ ụdaolu ọhụrụ na iPhone gị
Ọ bụrụ n’ịchọghị ụdaolu ndabara ọ bụla nwere na iPhone gị, ịnwere ike ịzụta ụdaolu ọhụụ site na ngwa Ntọala na iPhone gị. Mepee Ntọala ngwa na enweta Undsda & Haptics -> Udaolu -> Storelọ Ahịa , nke ga-emepe iTunes Store.
Iji zụta ụdaolu ohuru, pịa Uda n’elu menu a. Easiestzọ kachasị mfe iji chọta otu ụda olu bụ ịgbanye na Search tab na ala nke ngosipụta ahụ, pịnye aha abụ ahụ ịchọrọ ịtọ dịka ụdaolu gị na-esote okwu 'ụdaolu.'
Ozugbo ịchọtara ụdaolu ị na-achọ, zụta ya site na ịpị bọtịnụ na-acha anụnụ anụnụ n'aka nri nke ụdaolu na-egosi ọnụahịa ya. Kwenye nzụta gị site na iji Apple ID gị, ma ọ bụ site na iji ID ID ma ọ bụ ID ID ma ọ bụrụ na ị setịpụrụ ha iji kwado ịzụta.
Nịm gị zụrụ ụda Dị ka gị iPhone Ringtone
Iji tọọ ụda ị zụrụ dịka ụdaolu na iPhone gị, mepee ngwa Ntọala wee pịa undsda & Haptics -> Udaolu. Da ị zụrụ ga-apụta n’elu ndepụta ahụ n’okpuru Ringda ụdaolu. Ga-amata na etinyere ụdaolu mgbe ị hụrụ obere akara akara n'akụkụ ya.
Kporie Uda Olu Gị!
Tọala iPhone gị na ụdaolu ọhụrụ ma ị ga - emesị nwee obi ụtọ na ụda ị na - anụ mgbe iPhone gị natara oku na ederede. Jide n'aka na ịkekọrịta isiokwu a na mgbasa ozi mmekọrịta ka ndị enyi na ndị ezinụlọ gị nwee ike ịmụta ihe ịgbanwe ụdaolu na iPhones ha. Hapụ ikwu n’okpuru ma mee ka anyị mata ihe ụdaolu kachasị amasị gị bụ!